सनी लियोनीको पोर्न इन्डष्ट्रीमा पाइला ……. के रियाक्सन थियो त अभिभावकको !!! « गोर्खाली खबर डटकम
सनी लियोनीको पोर्न इन्डष्ट्रीमा पाइला ……. के रियाक्सन थियो त अभिभावकको !!!
सनी लियोनीले आफ्नो मेहनतको दममा वलिउडमा अलग्गै परिचय वनाएको छ । उनको अभिनयले भन्दा पनि नृत्यले सवैको मन जितको छ । सनीले वेवि डल देखि लिएर लैला मे लैला जस्तो गानामा शानदार डान्स गरेकी छिन् । ति गानाहरुलाई उनको फ्यान्स्को विच पपुलर पनि वनाएको छ । तर जो सनी लियोनी वलिउडमा लोकप्रिय वन्यो, एक समय उनले थुप्रै पोर्न मुभीमा पनि काम गरेकी थिईन् ।
एक्ट्रेसहरुको वेभ सिरिज करनजीत कौर ज्यादै चर्चामा रहेको सिरिज हो । उक्त सिरिजमा सनी लियोनीको जिन्दगी वारे थुप्रै कुरा वतार्र्ईएको छ र उनको जिन्दगीको वारे धेरै कुराहरु जान्न सकिन्छ ।
सनी लियोनीको लागि पनि उक्त वेव सिरिज महत्वपूर्ण रह्यो । यसको सुटिङ्गको शिलसिलामा उनी धेरै पटक रोएकी थिईन् । यो वेला धेरै चोटी उनको इमोशनल ब्रेकडाउन भएको थियो । यो वारे सनीले विस्तृतमा वताएकी छिन् ।
उनि भन्छिन् म सेटमा सधैं रोएकी छु, शुटिङ्ग गर्न सधैं मुश्किल हुन्थ्यो । जव आमा वावु यो दुनियाँमा हुँदैनन् तपाई उनिहरुलाई धेरै मिस गर्नु हुन्छ, मलाई पनि यहि फिल भएको छ । सनीले यो पनि वतायो की उनको जिन्दगीमा आएको नाटकिय मोडले उनको आमा वावुमा पनि धेरै असर ग¥यो ।
यो वारेमा सनी अगाडी भन्छन् म देखेर मेरो आमा वावु सधैं दुखी हुन्थ्यो र मेरो भाई नर्भस तर पनि सपोर्ट गर्ने कोशिस गथ्र्यो । हामी जिन्दगीमा धेरै चोटी जुन फैसला गर्छौ त्यसले अरुलाई के असर परिरहेको हुन्छ त्यो हामी थाहा पाईरहेका हुँदैनौं । त्यही कुरा मेरो जिन्दगीमा पनि लागु भएको थियो ।
टाउकोमै आगो लगाएर कपाल काट्ने अचम्मकाे तरिका, उनि भन्छन्, ‘टाउकोमै आगो लगाएर कपाल काट्ने असामान्य तरिकाको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ’
डा. बुढाथोकी भन्छन्ः ब्रसभरी मञ्जन हालेर दाँत सफा हुँदैन, यस्ता छन् खतराहरु- यी तरिका अपनाउनुस्